चित्रकार तथा समाजसेवी बि.बि.खालिङ | Solukhumbu | Solukhumbu News | Solu Samachar | Solu Khabar | Lukla | Salleri | Phaplu | Namche | Sallery | Nepal
चित्रकार तथा समाजसेवी बि.बि.खालिङ सोमवार, २०७२ श्रावण ०४ गते १८:०४
सोलुखुम्बु जुभिङ ६ निवासी बि.बि.खालिङ भनेर चिनिने चित्रकार तथा समाजसेवी भक्त बहादुर राईसँग गरिएको कुराकानी :
तपाई अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
चित्र बनाउनमै म प्रायः व्यस्त हुन्छु । यो नै मेरो दैनीकी हो ।
मेरो वाल्यकाल तनाव र छि छि सँग वित्यो । मेरो लागि वाल्यकाल त्यति सुखद थिएन । दुःखले हुर्केर्काे मान्छे हुँ म ।
तपाई किन चित्रकार नै बन्नुभयो ?
म आफूलाई चित्रकार भन्न सक्दिनँ । केवल पैसा कमाउने कामको खोजिमा सधैं जिरीदेखि नाम्चेसम्मको भरियाको काम गर्थें । साथै ट्रेकिङ्को भरियाले मात्रेै अमूल्य जिन्दगीको अर्थ नलाग्ने देखिए पछि जिन्दगीको जोखाना हेर्न थालें जहाँ नाम , दाम र काम एउटै पेसाले देओस् । एक दिन जोखाना खुट्यो मैले नाम , दाम र काम लिने पेसा हिमालको दृश्य क्यानभासमा उतारें । मैले हिमालका दृश्य उतार्न सिक्नु नै मेरो धर्म ठानें । मैले भन्ने गर्छु दुःख जीवनको साथी हो , आज म जे छु दःुखको उपज हो ।
चित्रकार बन्ने प्रेरणा कोबाट पाउनुभयो ?
कृष्ण खालिङ र अर्जुन खालिङ मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन् र उनीहरुबाट नै मैले चित्रकारिताको वीज पाएँ ।
तपाईको विचारमा चित्र बनाउनु भनेको कस्तो खालको कला हो ?
हामीले चित्र बनाउने दृश्यचित्र हो । चित्र बनाउनु भनेको चाँहि भावना , कल्पना , आँखाले देखिएका नदेखिएका र संसारमा भएका नभएकाको पनि चित्र बनाउन सकिन्छ । त्यसैले चित्र बनाउनु भनेको समर्पण , भावना र कल्पनाबाट वस्तुको कलात्मक ढंगले मूर्त अभिव्यक्त गर्ने कला हो ।
तपाईले चित्र बनाएर के पाउनु भयो र के गुमाउनु भयो जस्तो लाग्छ ?
चित्र बनाएर मैले एउटा काम पाएको छु । यो पेसामा लागेर गाँउ घरमा मान सम्मान पाएको छु । धेरै कुरा मसँग जोडिएको मैले चित्र बनाएर केही पनि गुमाएको छैन बरु जिन्दगीको आधा मोडमा नै आदरणीय बुबाआमा र देव्रे ज्योती गुमाएको छु ।
तपाईको चित्रकारिताबाट तपाई आफू कत्तिको सन्तुष्ट हुनुनुन्छ ?
व्याबहारिक क्षेत्रको हिसाबमा शत प्रतिशत सन्तुष्ट छु तर सृजनाको कुरा गर्ने हो भने सिक्ने क्रम निरन्तर चलिरहे कै छ ।
तपाई आफ्नो कार्यव्यस्तता सँसँगै समाजसेवाको बाटो पनि अगाल्नुभएको देखिन्छ । वास्तवमा समाजसेवा के हो ?
मानव जीवनमा समस्या र चुनौतीहरु हजारौं मात्रामा हुन्छन् । समाजसेवा गर्ने व्यक्तिसँग पनि उस्तै समस्याहरु हुन्छन् । तर पनि आफ्नो समस्या हुदाहुदै पनि सामाजिक समस्यालाई पनि आफ्नै समस्या ठानेर सामाधान गर्नु नै समाज सेवा हो ।
तपाई कसरी समाजसेवामा प्रेरित हुनुभयो ?
समाज सेवा भनेको कुनै ठेलागाडा होइन भित्र हृदयदेखि नै आउनु पर्छ । स्वस्फूर्त सेवाको भावना जागृत हुनुपर्दछ । मैले सम्झदा ममा १६-१७ बर्षको उमेरमा नै समाज सेवाको भाव देखा परेको रहेछ । त्यस बेला मैले दीपज्योती प्रा.वि.को निर्माण गर्दा जिम्मेवारीको नेतृत्वसँगै विना तलव शिक्षक भएर काम गरेको थिएँ । त्यो मेरो किशोरावस्थाको जोश मात्र रहेनछ । त्यो नै मेरो समाज सेवाप्रतिको पहिलो आधारशिला थियो । पछि ३३-३४ बर्षको उमेरदेखि चाँहि पुनः सक्रियताका साथ समाजसेवामा आबद्घ छु ।
तपाईले समाजसेवाको बाटोमा के के गर्नु भयो ?
दीपज्याति प्रा.वि.बनाउने सल्लाहदेखि भवन निर्माण भई नसक्दा चित्राको गोठ बनाएर बिना तलव सेवाको भावनाले पढाउने काम गरें । त्यसपछि समितिले महिनाको १८ सय दिएको थियो । मैले पढाएको बिद्यार्थीहरुले स्नातक तह सकाएका छन् । मैले समाजमा एउटा आशा लाग्दो सबैलाई समेट्न सक्ने संस्थाको आवश्यकता थियो । २०६८ सालमा सामाजिक अन्तक्र्रिया गराएँ र ‘ज्युव्युस एलाइन्स’ नामक संस्था गाउँमा स्थापना भयो । आजसम्म संस्थाको सल्लाहकार संयोजकको रुपमा काम गरिरहेको छु । विभिन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पर्शुराम खालिङले केही सहयोग गर्नुभयो । दर्शकहरुलाई पनि खाजा पानीको व्यवस्था समेत गरेका थियौं । पाँच सय जनाको उपस्थितिमा ६३ हजार रुपियाँको लागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । वि.स. २०६९ सालमा व्रेडाँडामा भुमेस्थान जिर्नोद्वार गर्ने निर्णय गरियो । जनजाति लक्षित वर्गको रकम साथै श्रमदान र मैले २५ हजार रुपैया नगद समेत सहयोग गरें । २०७० सालमा “खालिङ जातिको पहिचान ! स्वर्णिम समाजको रुपान्तरण !! ज्युव्युस एलाइन्सको अभियान !!!” भन्ने नारा मैले नै तयार पारेको हँु र यो संस्थाले निर्णय पारित ग¥्यो । उक्त कार्यक्रम ७५ हजारकोे लागतमा सम्पन्न भयो । वि.स. २०७० को हिउँदमा जुभिङ –२ स्थित ‘खरकोक्दे’ भन्ने ऐतिहासिक ठाउँको खोज र पुनः स्थापना ग¥यौँ । त्यसको लागि २० हजार खर्च गरेको छु । अझै पूर्ण भएको छैन । २०७१ सालमा जुभिङ – ६ ल्पेदेलमा भूमेस्थानमा पुरै भूईमा ढुङ्गा बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यो काम २ लाख ३८ हजार रुपैयाको लागतमा सम्पन्न भएकोे थियो । अब जुभिङ – ४ को भूमेस्थान बनाउने योजनामा छौं । जुभिङ– मा.वि.मा दुई कोठे शौचालय बनाउदै छौं । जसमा २ लाख ७५ हजार लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा आर्थिक सहयोगका लागि ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ बोलेको छु । जनकल्याण प्रा.वि.को लागि बुबा, आमाको नाममा १० हजारको अक्षयकोष खडा गरेको छु । हाल म यसरी समाजसँग आबद्घ भएर काम गरिरहेको छु । यहाँ पैसाको सवाल होइन महत्वपूर्ण कुरा विचार हो । र अबको दिनमा समाजलाई दिने नेतृत्व उच्च कोटीको हुनु जरुरी छ ।
तपाईले समाजसेवा गर्दा आफ्नो परिवार र समाजबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुभयो ? कसरी सहयोग पाई राख्नुभएको छ ?
मैले ज्यादै राम्रो उत्साह र सहयोग परिवार र समाजवाट पाएको छु । केही न केही गर्नु पर्ने जिम्मेवारी मरो काँधमा छ । सम्पूर्ण गाउँलेहरुले केही अपेक्षा गरेको र उहाँहरुको आशा निराशामा बदल्न हुन्न भन्ने मैले राम्रोसँंग बुझेको छु । परिवारमा पनि बढी सामाजिक कुराकानी नै भईरहन्छ । हामी परिवार नै समाजप्रति वफादार छौं । त्यही भएर यि सबै पक्षसँग राम्रो तालमेल मिलिरहेको छ । बाहिरबाट राजनीतिज्ञ , वुद्घिजिवी , शिक्षक र सबैबाट राम्रो सुभाव आईरहन्छ । मेरो निम्ति उहाँहरु हौसला दिई रहनुहुन्छ । यसरी उचित सल्लाह पाएकोमा मैले आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु ।
तझ विश्वास र माया पाउनु भएकै छ । अबको समाजसेवामा कस्तो नीति लिनुभएको छ ?
अबको दिनमा समाजसेवा मात्र गरेर पनि पुग्दैन र समाजले सधैं थैलो थापेर मात्रै पनि हुदैन । समाजमा राम्रो सामाजिक व्यवस्थापनको आवश्यकता देखेको छु । त्यसैले हामी जन्मिएको ठाउँमा रहांैला वा नरहौंला तर जुभिङ सधै रहिरहन्छ । त्यसो भएको हुदा जुभिङबासी जन्मिएको भुमिको शिर सधंै उच्च राख्ने अवसर मिलेको छ । यो कामको लागि समर्पित भई रहने प्रण गरेको छु ।
तपाई राजनीतिमा पनि रहनु भएको देखिन्छ । तपाईलाई राजनीति के हो जस्तो लाग्छ ?
विना राजनीति समाज , राष्ट्र र विश्व चल्न सक्दैन् । समाजको गाँस , वास र कपाससँग राजनीतिक सम्बन्ध छ । गर्नेले राजनीतिक फरक ढंगले गरे मेरो बुझाईमा राजनीति सत्य सेवा गर्ने यान्त्रिक शक्ति हो ।
राजनीतीमा कसरी प्रवेश गर्नु भयो?
सेवा र समाज एक सिक्काको दुुई पाटा हुन् । जब समाजले विश्वास गरेपछि आशाको किरण देखा पर्दै गए, विकासका काम जोडिदै गए । यही क्रममा राजनीतितर्फ प्रवेश गरें ।
तपाई राजनीतिमा लागेर के गर्ने सुरमा हुनुहुन्छ ?
समाजमा जतिसुकै सेवा र धर्म गरे पनि त्यो कमै हुन्छ, अपुग हुन्छ । अहिले जसरी समाज सेवामा लागिरहेको छु त्यसरी नै सदाबहार लागिरहने छु । मेरो जन्म भूमिप्रति मेरो लगाब सधै उच्च रहने छ ।
तपाई चित्रकार , समाजसेवी , राजनीतिज्ञ , बुद्घिजिवी एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ , यि सवै पक्षसँग कसरी तालमेल मिलाउनु हुन्छ ?
चित्र लेखन कोठामा गरिने काम हो । ‘नाम्चे आर्ट ग्यालरी’ नाम्चे बजारमा राखेको छु । पसल सिजनल भएको हुनाले समय निस्कन्छ । समाज सेवा र राजनीति एउटै गाउँ ठाउँमा गर्दै आएको छु । यसमा विचार चाहिन्छ । विचारलाई प्रयोग गर्दा बुद्घिजिवी जस्तो देखिन सक्ला । हामी प्रकृतिको उपहार हौं । त्यसैले लिनु भन्दा दिनु बेस ठान्दछु । समय मिलाउन सक्नु पर्छ । तालमेल मिल्छ ।
सामाजसेवामा राजनीति कसरी जोडिन आउछ् ?
समाजसेवा गर्नु एक किसिमको धर्म हो भने राजनीति वफादार पहरेदार संरक्षकको भूुमिकामा जोडिएर आउछ ।
के समाजसेवामा राजनीति अपरिहार्य हो ?
संसारमा समाजसेवा मात्र गर्ने महान् व्यत्तित्वहरु छन् । राजनीति मात्र गर्नेहरु पनि छन् । समाज सेवामा राजनीति भन्दा राजनीतिमा समाजसेवा अपरिहार्य देखिन्छ । वास्तवमा राजनीतिमा समाजकल्याण सत्य सेवा चाहिन्छ ।
तपाईको अबको भावी योजना के छ?
गाउँको विकासमा दत्तचित्त भएर समाजको सेवक बन्ने बाटो खुलिसकेको छ । यसैमा मलाई सन्तुष्टि मिल्छ । त्यसैले यो भन्दा नयाँ केही पनि सोचिएको छैन ।
बि.बि. खालिङको विचारमा मानिस कसरी सफल बन्न सकिएला ?
मेरो विचारमा इच्छाशक्ति विकासमा पहिलो अनिवार्य सर्त हो । लगनशीलता, लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति ज्यानको बाजी दोस्रो सर्त , दःुखमा नआतिने सुखमा नमातिने तेस्रो सर्त र अन्त्यमा धैर्यता महत्वपूर्ण गरी ४ सर्तहरुसँग सहमत हुनुपर्छ ।
र अन्तमा हाम्रो प्रकाशोन्मुख पत्रिकालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हातेमु स्टारद्वारा प्रकाशन हुन लागेको पहिलो मुखपत्र ‘नव कान्ति’ आफैमा नामै काफि छ । यो अध्याँरोमा उज्यालोको खोजी गर्ने तपाईहरु स्टार परिवारलाई सदाबहार स्टार भइरहोस् र नयाँ स्टारको जन्म गर्नमा सधैं पे्ररित गरोस् । सफलताको शुभकामना छ । अन्त्यमा भाइहरु हुनुहुन्छ , सुरु गर्नुभयो अत्यन्त राम्रो काम सुरु गर्नु भयो , काम गर्न कहिल्यै नछोड्नुहोस् अवश्य फल मिल्छ । हामी भाग्यमानी हौं । यो धर्तीमा केही छोडेर जाऊँ र महान् बनौँ । मैले सधैं यसै भन्ने गरेको छु ।
समस्याको जन्जिरभित्र जिउन तम्सिन्छ
जसको निम्ति आफूलाई बिर्सिएर
अरुको निम्ति साँचो अर्थले बाँच्न सिक्छ
उसकै विर्ता हो यो संसार
पक्कै नालायक र नामर्दको लागि होइन ।।
प्रस्तुति: सोलु अनलाइन सहकर्मी कृष्ण खालिङको सहयोगमा अर्जुन राई